လာအိုနိငျငံ ကို ဖွတျကြျောလာ တဲ့ မိုလမေု့နျတိုငျး ရဲ့ နောကျဆုံး အခွအေနေ – Let Pan Daily
(၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ အောကျတိုဘာလ (၂၉)ရကျနေ့ နံနကျ(၇:၀၀)နာရီအခြိနျ ထုတျပွနျခကျြ) ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောအ‌ခွအေနေ။ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျနှငျ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောအရှတေ့ောငျပိုငျးတို့ တှငျ တိမျအသငျ့အတငျ့မှ တိမျထူထပျနပွေီး၊ ကနျြဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတှငျ တိမျအနညျးငယျမှ တိမျအသငျ့အတငျ့ ဖွဈထှနျးနပေါသညျ။ ထူးခွားသညျ့ အခွအေနေ။ ယနမွေ့နျမာ စံတျောခြိနျ(၀၆:၃၀)နာရီအခြိနျ တိုငျးထှာခကျြမြားအရ လာအိုနိုငျငံကို ဖွတျကြျောခဲ့သော အပူပိုငျးမုနျတိုငျး “မိုလေ့”(Molave)သညျ ထိုငျးနိုငျငံပျေါသို့ ရောကျရှိခဲ့ပွီး၊ အပူပိုငျးမုနျတိုငျးငယျအဖွဈသို့ အားလြော့သှားခဲ့ပါသညျ။ အဆိုပါ အပူပိုငျးမုနျတိုငျးငယျသညျ အနောကျ-အနောကျမွောကျဘကျသို့ ဆကျလကျရှလြေ့ားကာ လဖေိအားနညျးရပျဝနျးအဖွဈ အားလြော့သှားမညျဟု ခနျ့မှနျးရပါသညျ။
ယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ။ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီးတှငျ နရော အနှံ့အပွား၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့တှငျ နရောစိပျစိပျ၊ နပွေညျတျော၊ ပဲခူးတိုငျး ဒသေကွီး၊ ခငျြးပွညျနယျ၊ ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ကယားပွညျနယျတို့တှငျ နရောကြဲကြဲနှငျ့ ကနျြတိုငျးဒသေကွီး နှငျ့ ပွညျနယျတို့တှငျ နရော ကှကျကြား မိုးထဈခြုနျးရှာပွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီးတှငျ နရောကှကျ၍ မိုးကွီးနိုငျပါသညျ။ ရှာရနျရာနှုနျး(၈၀) ဖွဈပါသညျ။ မွနျမာ့ပငျလယျပွငျ။ လှိုငျးအနညျးငယျမှ လှိုငျးအသငျ့အတငျ့ရှိမညျ။ လှိုငျးအမွငျ့မှာ မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျး တဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျ ပွငျတို့တှငျ (၄)ပမှေ (၇)ပခေနျ့ ရှိနိုငျပါသညျ။
Local residents and volunteers deliver aid packages to residents affected by heavy flood in Quang An Commune, Thua Thien Hue, Vietnam, on Monday, October 20, 2020. Families in Quang An Commune have been struggling to commute and receive food and supplies due to heavy flood.
နောကျ(၂)ရကျအတှငျး စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအောကျပိုငျး၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မကှေး တိုငျးဒသေကွီး၊ ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး)၊ ခငျြးပွညျနယျနှငျ့ ကယားပွညျနယျတို့တှငျ နရောကြဲကြဲနှငျ့ နပွေညျတျော၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျ တို့တှငျ နရောစိပျစိပျ မှ နရောအနှံ့အပွား မိုးထဈခြုနျး ရှာနိုငျပါသညျ။
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၉)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့ တွင် တိမ်အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ်နေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် တိမ်အနည်းငယ်မှ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။ ထူးခြားသည့် အခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာ စံတော်ချိန်(၀၆:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ လာအိုနိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သော အပူပိုင်းမုန်တိုင်း “မိုလေ့”(Molave)သည် ထိုင်းနိုင်ငံပေါ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ အားလျော့သွားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်သည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် အားလျော့သွားမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာ အနှံ့အပြား၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ နေပြည်တော်၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာ ကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ လှိုင်းအနည်းငယ်မှ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ် ပြင်တို့တွင် (၄)ပေမှ (၇)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်(၂)ရက်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် နေပြည်တော်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ် မှ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်း ရွာနိုင်ပါသည်။
ဆယ်တန်း ကျောင်းသူလေး တစ်ဦး ရဲ့ ရင်နင့် ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်